Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Mitombo ny fahasosorana amin'ny fameperana ny dia
Airlines • Airport • Associations News • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Vao mainka sosotra ny olona noho ny fameperana fitsangatsanganana COVID-19 ary vao mainka nahita ny fijalian'ny kalitaony vokatr'izany.
67% amin'ireo valinteny fanadihadiana dia nahatsapa fa ny ankamaroan'ny sisintany dia tokony hosokafana ankehitriny, isa 12 isan-jato hatramin'ny fanadihadiana Jona 2021.
Ny 64% n'ireo mpamaly ny fanadihadiana dia nahatsapa fa tsy ilaina ny fanidiana ny sisin-tany ary tsy nahomby tamin'ny famitana virus (hatramin'ny isa 11 isan-jato hatramin'ny Jona 2021).
73% no namaly fa mijaly ny kalitaon'ny fiainany noho ny fameperana fitsangatsanganana COVID-19 (isa 6 isan-jato hatramin'ny Jona 2021).
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) nitatitra fa ireo mpandeha an-habakabaka dia sosotra amin'ny fameperana fitsangatsanganana COVID-19. Fanadihadiana iray natolotry ny IATA misy valiny 4,700 tao amin'ny tsena 11 tamin'ny volana septambra dia naneho ny fahatokisany fa ny risika amin'ny COVID-19 dia azo tantanana tsara ary tokony haverina amin'ny laoniny ny fahalalahana mandeha.
67% amin'ireo namaly no nahatsapa fa ny ankamaroan'ny sisintany dia tokony hosokafana ankehitriny, isa 12 isan-jato raha ny fanadihadiana natao tamin'ny volana Jona 2021.
64% ny valinteny dia nahatsapa fa tsy ilaina ny fanidiana ny sisin-tany ary tsy nahomby tamin'ny famitana virus (hatramin'ny isa 11 isan-jato hatramin'ny Jona 2021).
“Vao mainka sosotra ny olona amin'ny Famerana ny fivezivezena sy ny covid-19 ary vao mainka nahita ny fiainany nijaly vokatr'izany. Tsy hitan'izy ireo fa ilaina ny fameperana ny dia mba hifehezana ny viriosy. Ary tsy nanadino fotoam-pianakaviana loatra izy ireo, fotoana mety amin'ny fampandrosoana manokana ary laharam-pahamehana amin'ny orinasa. Raha fintinina dia tsy azon'izy ireo ny fahalalahana manidina ary maniry ny hamerenana azy ireo amin'ny laoniny. Ny hafatra alefan'izy ireo amin'ny governemanta dia: COVID-19 dia tsy hanjavona, noho izany dia tokony hametraka fomba hitantanana ny loza mety hitranga isika mandritra ny fiainana sy ny fivezivezena ara-dalàna, "hoy i Willie Walsh, IatăTale jeneraly.
Mitombo ny fanohanana amin'ny fanandramana na fanaovana vaksiny hisolo ny quarantine
Ny tena misakana ny fivezivezena an-habakabaka dia mitohy hatrany ny fepetra amin'ny karantina. 84% ny valin-kafatra dia nanambara fa tsy handeha izy ireo raha misy ny quarantine any amin'ny toerana alehany. Ny habetsaky ny valinteny izay manohana ny fanesorana ny quarantine raha:
Ny olona iray dia nanandrana ratsy ho an'ny COVID-19 (73% tamin'ny volana septambra raha ampitahaina amin'ny 67% tamin'ny volana Jona)
Ny olona iray dia vita vaksiny (71% tamin'ny volana septambra raha 68% tamin'ny volana Jona).